Mogadishu Journal » Shariif Xassan Xassan Sheekh Aadan oo ka hadlay qaraxyadii ka dhacay Baydhabo
Shariif Xassan Xassan Sheekh Aadan oo ka hadlay qaraxyadii ka dhacay Baydhabo
Mjournal :–Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Shariif Xassan Sheekh Aadan oo ka hadlay qaraxyadii maalintii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo , ayaa dalbaday gargaar deg deg ah oo lala gaaro dadka qaba dhaawacyada culus.
Shariif Xasan ayaa xusay in ay jiraan dad aan waxba looga qaban karin Isbitaalada Baydhabo, loona baahan yahay in kaalmo caafimaad oo dibada ah loo qaado, si loo baxnaaniyo.
Shariif Xasan ayaa sheegay in ay adag tahay in qof raba in uu is qarxiyo in laga hor-tago, hase ahaatee waxaa uu xusay inay socdaan qorshayaal ka dhan ah Al-Shabaab oo looga saarayo deegaanada gobolada dalka.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyada qaraxyadaas, isla markaana la beegsaday saraakiil iyo mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koofur Galbeed.
Qaraxyada ayaa goobaha lala beegsaday ay ahaayeen maqaayado ku yaallay faras magaalaha magaalada, waana goobo aad u mashquul ah, dad badana ay xilliyada galbihii isugu tagaan.
Ugu danbeyntii, ku dhawaad 30-ruux ayaa ku geeriyooday qaraxyadii shalay ka dhacay Baydhabo, waxaana ku dhaawacmay illaa lixdameeyo ruux, iyadoo dad ku dhow labaatan ruux xaaladooda ay aad u liidato, isla markaana waxba looga qaban karin magaalada Baydhabo.
Madaxweyne Xassan Sheekh oo ka qeyb-galay kulan ay lahaayeen gollaha wasiirrada & taliyayaasha…
At least 30 killed in Somalia restaurant bombings claimed by Islamists